Obethumbe indodakazi ucabange ngokuyishintsha inabukeni wayibuyisela | News24
Obethumbe indodakazi ucabange ngokuyishintsha inabukeni wayibuyisela
New York - Iphinde yacabangisisa indoda ngokuthumba indodakazi yayo ngemuva kokubona ukuthi kuzofanele ayishintshe inabukeni, kushoamaphouisa aseNew York.
Umnyango wamaphoyisa eNew York uthe ubophe indoda eneminyaka engu-39 ubudala uLeonel Moronta waseBrooklyn ngemuva kwezinsolo zokudlwengula owayeyintombi nokuthumba indodakazi yakhe eneminyaka emibili ubudala.
OLUNYE UDABA: Umdlwenguli ugweme ukuboshwa ngokushada isisulu
UMoronta ubhekene necala lokudlwengula nelokuthumba kanti ungeniswe esibhedlela ngemuva kokuzama ukuzibulala esesitokisini ezilengisa ngebhulukwe.
Ngokusho kophenyo lwamaphoyisa uMoronta wagqekeza emzini kawoyo owayeyintombi ngoMsombuluko ngezithuba zabo-07:30 ekuseni. Wadlwengula umam wendodakazi yakhje wase ebaleka nengane ngemuva kwesigameko.
Ngemuva kwamahora ambalwa uMoronta washayela ucingo umama wengane emsabisa ngokuzibulala yena nendodakazi. Amaphoisa abe eseqala ukukhuluma nale ndoda ocingweni akhuluma naye ngokunakekela ingane.
Ngesikhathi amaphoyisa esethi azomshintshela inabukeni enganeni uMoronta wavuma ukuhlangana namaphoyisa wawanika ingane. UMoronta ube esezinikela emaphoyisa aseBrooklyn-Queens Expressway eduzane naseBedford and Wythe Avenues, kubika iwwww.